अवैध सुनको बालासहित तीनजना पक्राउ « प्रशासन
अवैध सुनको बालासहित तीनजना पक्राउ
५ बैशाख २०७५, बुधबार
काठमाडौं । अवैध सुनको बालासहित ३ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं ठहिटीका ३६ वर्षीय रत्नलाल श्रेष्ठ, उदयपुर त्रियुगाका २२ वर्षीय लिलाकुमारी श्रेष्ठ र सिराहा लाहानमा २० वर्षीय इन्द्र सदे रहेका छन् ।
बैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा कतारबाट फर्किएका कामदारहरुलाई प्रयोग गरी त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छली सुनका गर गहनाहरु तस्करी हुने गरेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरबाट प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा खटिएको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
महानगरीय प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरको टोलीले रतनलालबाट ५०/५० ग्रामको ३ ओटा चुरा, लिलाबाट ५० ग्रामको एक चुरा र इन्द्रको साथबाट ५० ग्रामको चुरा बरामद गरेको छ । उनीहरुलाई आवश्यक कारवाही र अनुसन्धानका लागि राजश्व अनुसन्धान विभाग हरीहरभवन पुल्चोक ललितपुरमा पठाइने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ ।
28 June, 2022 10:06 pm
‘डीएफटीक्यूसी लेखेको जार र बोतलको पानी मात्रै प्रयोग गर्नू’
काठमाडौँ । प्रशोधित पिउने पानीको बोतल र जारको लेबलमा डीएफटीक्यूसी
28 June, 2022 7:57 pm
जनप्रतिनिधि अग्रपङ्क्तिका सिपाइ : ज्ञवाली
चितवन । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जनप्रतिनिधि आजको अग्रपङ्क्तिका
28 June, 2022 7:33 pm
सिंहदरवार वैद्यखानाको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. यादव
काठमाडौँ । सिंहदरबार वैद्यखानाको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. श्यामबाबु यादव
28 June, 2022 7:27 pm
दुई दर्जन बढी पारामेडिक्सको स्तरवृद्धि
काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागले दुई दर्जन बढी पारामेडिक्सको स्तर